Zụrụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ na nnukwu | AASraw
/blog/testosterone Enanthate/Zụrụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ na nnukwu
Ihe na 01 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na testosterone Enanthate. O nwere 12 Comments.
Gịnị bụ Testosterone Enanthate?
testosterone Enanthate bụ otu n'ime testosterones a na-ejikarị emekarị maka ọgwụgwọ nke testosterone dị ala. Ọ na-ewu ewu na arụmọrụ nke ọma. Nke a bụ otu n'ime ọdụdụ anabolic nke kachasị ọnụ ahịa n'ahịa, ọ bụ nke ọma, nke kachasị nke ndị okenye niile na-enyefe ya.
Testosterone Enanthate bụ steroid nke anabolic zuru oke maka ọkwa niile ojiji. Nke a bụ steroid zuru ezu nke anabolic maka onye mbụ na-eme steroid na ọ ga-adị irè maka onye ọ bụla nwere oge buru ibu na oche. Ọ ga-ebute ya na mmetụta ndị nwere ike ịnweta ma anyị ga-ahụkwa na ha dị mfe ịchịkwa. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe ijuanya na ọ ghaghị ịbụ. E kwuwerị, ọ bụ ezie na ihe mgbakwunye ọ bụ nanị testosterone, hormone ahụ mmadụ bụ ọ bụghị nanị nke ọma ma otu nke dị mkpa maka ahụike na ahụike anyị.
Gịnị bụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ?
Aha: Testosterone Enanthate
Ụdị Mkpụrụkpụ: C21H28O3
Ọbara Mkpụrụ: 400.59
Ntọala Melt: 34-39 ℃
Nchekwa Temp: 2-8 ℃
Testosterone Enanthate Cycles na-eji
Testosterone Ụbụrụ nke Enanthate na-abụkarị nke nkwụsị ma ọ bụ ikuku na-enweta ihe okike, ọ bụ ezie na ọ pụkwara iji ya mee ihe n'ụzọ doro anya na ịchacha ma ọ bụ ọkpụkpụ abụba. Maka ịchọta ma ọ bụ ịba ụba, Testosterone Enanthate na-ejikarị arụ ọrụ dị elu (na-abụkarị opekempe nke 500mg kwa izu), nakwa n'ihi na ọ bụ steroid anabolic na ogologo ester nke a na-etinye ya na ya, ọ ga-egosipụta ogologo ndụ nke gburugburu 7 - 10 ụbọchị, ya mere Testosterone Enanthate cycles na-agbaso oge 10 - 12 izu ma ọ bụ karịa.
Na njedebe ma na-egbutu oge, Testosterone Enanthate na-ejikọta ya na ogige ndị ọzọ nke ọdịdị nke ga-eme ka njedebe njedebe nke njedebe nke njedebe nke njedebe nke onye ọrụ (nkwụsị, ikpochasị ihe, ma ọ bụ oke abụba). Dịka ọmụmaatụ, Testosterone Enanthate cycles maka nzube nke ịkụnye ihe na-agụnyekarị Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate) na / ma ọ bụ Dianabol (Methandrostenolone), ebe Dianabol na-emekarị maka izu 6 mbụ dịka ihe arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na Testosterone Enanthate cycles na-egbutu ma ọ bụ abụba abụba, Testosterone Enanthate na-emekarị na TRT (Testosterone Replacement Treatment) usoro onu ogugu gburugburu 100mg kwa izu ka ebe ọzọ ogige ndị ọzọ mma n'ihi na oke na abụba ọnwụ na-mesiri n'oge okirikiri . Ojiji nke Testosterone Enanthate na usoro onu ogwu a bụ nanị iji nọgide na-arụ ọrụ nke anụ ahụ kama ịme ka uru na mmelite arụmọrụ pụta ìhè.
Ọdịdị nke raw Testosterone Enanthate ntụ ntụ:
Iji meso testosterone ala, ọkọlọtọ Testosterone Enanthate doses ga-ada na 100-200mg kwa ụbọchị 7-10 kachasị karịa. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị dọkịta ga-ekewa ngwongwo nile ma nye ya ya kwa ụbọchị ise. Ndị na-anaghị adịkarị na United States ụfọdụ ndị dọkịta ga-ekwu usoro doses nke 200-400mg kwa izu 2-3 na n'ọnọdụ ụfọdụ kwa izu 4. Nke a dị nnọọ njọ kama ọ bụ omume ụfọdụ na-esote. Ogologo oge nke ọgwụgwọ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọtụtụ ụmụ nwoke ndị chọrọ ọgwụgwọ ịgwọ ọrịa dị ala ga-achọ ya maka ndụ. Nke a nwere ike ịda iwe ma jụọ onwe gị ajụjụ dị mkpa; ọ ga - akara gị mma ịta ahụhụ site na testosterone dị ala ma ọ bụ mee ya?
N'ime nhazi mmezi ihe, ọtụtụ Testosterone Enanthate doses ga-ada na 200-500mg kwa izu. 200-250mg kwa izu zuru oke ma ọ bụrụ na a na-eji hormone eme ihe iji merie mmebi nke testosterone nke sitere na iji steroid ndị ọzọ anabolic. Maka ezi mmetụta nke anabolic, ọtụtụ ndị ikom ga-achọta 400-500mg kwa izu iji bụrụ nke dị irè ma dị mfe ịchịkwa. A ghaghị kewaa usoro dị otú ahụ na nha abụọ kwa izu kwa izu maka ngụkọta izuzu kwa izu. Mfe nwere ike ịga elu karịa 500mg kwa izu; Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ikom ga-achọta ebe 500mg ga-abụ ihe niile ha chọrọ. Ọ bụrụ na achọrọ ihe ọzọ, ọtụtụ ụmụ nwoke ga-achọ 600-1,000mg kwa izu nwere ike ịnagide ma chịkwaa ma dosesị nke na-abanye na njirimara 1,000mg ga-eme ka o nwekwuo ohere nke mmetụta ọjọọ. Otutu testosterone nwoke nwere ike ijide ma chịkwaa ga-adịgasị iche site n'otu nwoke ruo na-esote. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ikom ga-achọta azịza n'elu 1,000mg kwa izu ọbụla, mana ha ga-enye aka rụọ ọrụ dị na ọkwa ụfọdụ.
N'agbanyeghị nke gị nzube nke iji, Testosterone Enanthate stacks ọma na niile anabolic steroid. Otú ọ dị, e nweghị ihe kpatara ya iji tinye ya na testosterone ọzọ. Nke a ga-abụ ihe na-abaghị uru n'ọtụtụ ọnọdụ. Nanị họrọ ndị ọzọ steroid nke na-ezute nzube a chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma.
Testosterone Enanthate Nyocha:
Testosterone Enanthate bụ ezigbo steroid steroid anabolic, ma ọ bụkwa otu n'ime ihe ndị kachasị na-arịa ọrịa steroid nke oge niile. Ọ dị nnọọ ike ma na-ebute ndidi n'etiti ọtụtụ ndị okenye. Dị ka onye na-agwọ ọgwụgwọ, iji Testosterone Enanthate nwere ike ịgbanwe ndụ gị. Ọ bụ ihe karịrị mmadụ nwere ike ime ka ọ dị afọ iri abụọ. Ọ bụghị naanị na ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-alaghachi azụ, ọ ga-adịkwu mma.
N'ime ike ịrụ ọrụ, ebe ọtụtụ ndị ga-eji ụrọ ndị ọzọ anabolic na-emepụta na Testosterone Enanthate ọ nwere ike iji ya naanị ya. Nke a bụ ụbụrụ nke anabolic steroid nke nwere ike ịkwalite mgbanwe mgbanwe dị na ahụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-ewere usoro ọgwụgwọ supraphysiological iji nweta mgbanwe dị mma ma dị ịrịba ama, ekele na ọnụ ụzọ maka mmetụta ọjọọ na-anọgide dị elu. Dị oke mkpa, ọ bụ ezie na ọnụahịa nke steroid a dị oke ọnụ karịa karịa ọnụ ahịa na-enye ya ọbụna ka ọ na-adọrọ mmasị karia ọ dịlarị. N'agbanyeghị ụdị ọkwa ị na-ahụ, i nwere ike ghara ịga na Testosterone Enanthate.
Ebee ka zụrụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ online?
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ Trenbolone Acetate powder source online, ma ọ bụ ike ịzụta Ezi Trenbolone Acetate ntụ ntụ online. E nwere ọtụtụ ebe na-ere ngwaahịa ụgha na ahịa. ya mere, mgbe ị na-azụta Trenbolone Acetate powder online, ịkwesịrị ịhọrọ otu ezigbo ala.
uru nke ịzụta Testosterone Enanthate ntụ ntụ site na AASraw:
2) Onye bara ọgaranya nwere ọhụụ onye na-etinye ya n'aka na ọ bụ ihe ọ bụla steroid. Usoro ụzọ njem dị iche iche, na ịhọrọ nke kacha mma dịka adreesị gị.
3) Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọma nke nnyefe dị mma karịrị 95%.
4) Oge ezipụ maka uzuzu steroid: 3-5 ụbọchị ọrụ na USA, na 4-6 ụbọchị ọrụ na mba EU.
3. Anyị nwere ndị ahịa n'ụwa niile
Tags: testosterone enanthate ntụ ntụ
Achọrọ ịzụta 100 grams nke ule E na 100 grams nke Deca chọrọ ịmara ọnụahịa na ozi dị na iziga ego gram. Ma ọ bụ iwu ego.
Mmasị ịzụta ụfọdụ ule E, ule C na ụfọdụ Deca. Anụla m na ụmụ gị dị mma ma dị mma. Biko laghachikwute m.
Achọrọ ịzụta 100 grams na ntụ. New iji rụọ ọrụ. Dị ka ngalaba ọrụ gwara m banyere nke a.
Ego ole maka nyocha 500mg E ntụ na kedu ka m ga-esi zụta
OK, anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo o kwere omume.
Achọrọ ịzụta 100 grams nke ule E na 100 grams nke Deca chọrọ ịmara ọnụahịa na ozi dị na iziga ego gram
OK, anyị ga-enweta gị
Ndewo ebe ahụ. Ego ole ka 100 grams nke Testosterone Enanthate na-efu m? Ego ole ka ụgwọ ahịa na Netherlands?
OK, Aga m akpọtụrụ igbe ozi gị.
Kedu ihe ga-efu maka ịzụta 25 grams nke Test Enanthate, nke e nyefere na Ontario, Canada
Enwere m ike nweta nke a na Canada
Hey m chọrọ ule e. Na steeti bathton ị nwere ike nweta ya ebe a?
The Definitive Guide to Testosterone propionate powder from	Ebumnuche sitere na Orlistat maka ntụpọ ọnwụ-Ihe dị egwu ịṅụ abụba ị kwesịrị ịmara !!!